Soosaarayaasha mitirka tamarta elektroniga ah ee horay loo sii diyaariyey - Shiinaha Shiinaha Bixiyeyaasha mitirka tamarta elektarooniga ah, Warshadaha
Mitirka tamarta diyaarka ah ee mar-hore loo adeegsado (kaarka IC) waa shey cusub oo lagu cabbiro tamarta tamarta oo ay soo saartay shirkadeena iyadoo la tixraacayo tilmaamaha farsamada ee GB / T17215.321-2008. Waxsoosaarkan ayaa adeegsanaya wareegyo isku-dhafan oo ballaaran iyo farsamooyin SMT, oo leh hawlo ay ka mid yihiin cabbiraadda tamarta korantada, xog-ururinta, kormeerka waqtiga-dhabta ah, iyo is-dhexgalka macluumaadka.
Mitirka wajiga korantada korantada (fog) waa shey cusub oo lagu cabbiro tamarta tamarta oo ay soo saarteen shirkadeena iyadoo la tixraacayo tilmaamaha farsamada ee GB / T17215.321-2008. Waxsoosaarkan ayaa adeegsanaya wareegyo isku-dhafan oo ballaaran iyo farsamooyin SMT, oo leh hawlo ay ka mid yihiin cabbiraadda tamarta korantada, xog-ururinta, kormeerka waqtiga-dhabta ah, iyo is-dhexgalka macluumaadka.
Mitirka warshadaha korantada ee hal-wajiga ah (module + fog) waa badeecad cabbiraadda tamarta cusub oo ay soo saarteen ayna soo saartay shirkadeena iyadoo la tixraacayo tilmaamaha farsamada ee GB / T17215.321-2008. Waxsoosaarkan ayaa adeegsanaya wareegyo isku-dhafan oo ballaaran iyo farsamooyin SMT, oo leh hawlo ay ka mid yihiin cabbiraadda tamarta korantada, xog-ururinta, kormeerka waqtiga-dhabta ah, iyo is-dhexgalka macluumaadka.
Mitirka wajiga korantada elektiroonigga ah (IC Card + module) waa badeecad cabbiraad cusub oo tamarta ah oo ay soo saartay shirkaddeena iyadoo la tixraacayo tilmaamaha farsamada ee GB / T17215.321-2008. Waxsoosaarkan ayaa adeegsanaya wareegyo isku-dhafan oo ballaaran iyo farsamooyin SMT, oo leh hawlo ay ka mid yihiin cabbiraadda tamarta korantada, xog-ururinta, kormeerka waqtiga-dhabta ah, iyo is-dhexgalka macluumaadka.
Mitirka tamarta 3phase (IC Card) waa badeecad cusub oo lagu cabiro tamarta oo ay sameysay shirkadeena iyadoo la tixraacayo tilmaamaha farsamada ee GB / T17215.301-2007, DL / T614-2007 iyo DL / T645-2007. Waxsoosaarkan ayaa adeegsanaya wareegyo isku-dhafan oo ballaaran iyo farsamooyin SMT, oo leh hawlo ay ka mid yihiin cabbiraadda tamarta korantada, xog-ururinta, kormeerka waqtiga-dhabta ah, iyo is-dhexgalka macluumaadka.